Thenga abalandeli be-Instagram eChile ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Thenga abalandeli be-Instagram eChile
Disemba 12, 2018 0 IiCententarios 1104
Ukuqhubela phambili kwezobugcisa kusimema ukuba sibe kwindawo ephambili, ukuya phambili ebusweni beendlela ezintsha. Ezi zinto zifuna ukuphucula umgangatho wobomi bethu ngokusebenza kweenkonzo esizisebenzisa mihla le. I-intanethi, iinethiwekhi zentlalo, iifowuni kunye nezinye izixhobo zombane kunye nezibukhali zitshintshe kwaye zalungisa indlela abaphila ngayo bonke abantu. Ngubani onokuthi amaqonga edijithali anokuba nefuthe elinjalo kubomi bethu? Kodwa xelela amawaka abantu abajonge ukuthenga abalandeli ye-Instagram eChile mihla le
Unokuba nomdla Thenga abalandeli baka-Peru ePeru.
Ukuzilungiselela umhlaba oqhubeka nokudala yeyona nto iphambili empumelelweni. Umrhwebi owala amathuba okuba andise ishishini lakhe kwinethiwekhi yezoluntu akanakwenza ibango lokuba inzuzo ilingana naleyo ayenzileyo. Okwangoku Iimarike ziye zafudukela kumaqonga edijithali. Ezi ziibhodi yomsinga ukuya kwintengiso yeziqhamo kunye nokukhula kwemali.
Ukuba sihamba kancinci ngokunzulu kwisihloko senethiwekhi zentlalo, I-Instagram yenye yeqonga eliyithandayo labantu baseChile. Olunye uphando luveza ukuba yeyona ntetho yesithathu esetyenziswa kakhulu kwilizwe lase Mzantsi Melika. Kwaye kungenxa yokuba ngenxa yokufikeleleka kwayo, uhlaziyo lwayo olonwabisayo, amandla amakhulu kunye noqoqosho sele ekhona ngaphezu kwezigidi ze-900 zabantu ekuhlaleni, apho izigidi ze-4.8 zizezizwe zaseChile (2017).
Kodwa i-Instagram ayisiyoyokuzonwabisa nje. Ikwanika nethuba lokukhulisa umsebenzi wegcisa okanye ukwandisa ishishini losapho elincinci. Wonke umntu unokubonisa iitalente kunye nemisebenzi yabo kweli qonga Ngokuqinisekileyo yeyona ndawo ifanelekileyo yokwenza oko.
Nangona kunjalo, kukho into ekufuneka uyiqwalasele. Unokuba ngumculi ogqwesileyo kwaye iprojekthi yakho yeshishini inokugqwesa kwabanye, kodwa ukuba i-akhawunti ayinayo abalandeli, ayiyi kuba nomtsalane kwabanye. Akukho mntu uya kulandela iakhawunti enamanani asezantsi kuba "kunokuba kubi", kodwa loo nto inokutshintsha ukuba uthatha isigqibo Thenga abalandeli be-Instagram eChile
Usenokungacingi malunga nokwenzeka, kodwa ukuthenga abalandeli be-Instagram eChile kunezibonelelo ezininzi eziza kukuvumela ukuba ubeke iakhawunti yakho. Ke abanye baya kuba nakho ukulwazi uphawu lwakho lomntu, umsebenzi wakho okanye inkampani ozinikele kuyo. Uya kuyibona loo nto Eli lelona qonga lilungileyo lokwenza intengiso zedijithali Kwaye isiqinisekiso kukufikelela okukhulu.
Kukho iinkonzo ezibonelela ngentengiso abalandeli. Zonke zihambelana neemfuno zomthengi kunye nesimo sabo soqoqosho. Iiphakheji zabalandeli zinokuqala ukusuka kwi-2000 ukuya kwi-10.000 pesos. Umthengi unokukhetha phakathi kwabalandeli bamadoda nabasetyhini kunye nendawo.
Ababoneleli beenkonzo kuya kufuneka bacele ulwazi olusisiseko (igama nefani, imeyile, umnxeba kunye ne-url yeakhawunti). Lumka kuba awufanelanga unike iipassword kunye neenkcukacha zakho zebhanki. Iintlawulo zingenziwa ngezixhobo ezahlukeneyo zezezimali njenge-Multicaja, i-servipago kunye newebhu.
Nje ukuba intlawulo iqinisekisiwe, kwiiyure ze-24 malunga uya kuba nazo abalandeli bakho kwi-Instagram, ukuthanda, ukubonwayo kunye neenkcazo. Ngokungathandabuzekiyo utyalomali olukhulu oluya kuzisa iziphumo ezilungileyo ngexesha elifutshane.
Kukho abo banenkathalo malunga nemfihlo kunye nemeko yeakhawunti xa bathenga abalandeli be-Chile eChile. Akukho nto ikukhathazayo. Iakhawunti iya kukhuselwa ngalo lonke ixesha kwaye iqonga alizukuyivimba okanye liyivale ngenkqubo eyenziweyo.
Thenga abalandeli be-Instagram eVenezuela
Thenga abalandeli baka-Peru ePeru